Daawo qeybaha ay ciidamada Puntland kala wareegeen Al shabaab ee Buuraha-galgala |
Daawo qeybaha ay ciidamada Puntland kala wareegeen Al shabaab ee Buuraha-galgala
Garoowe (SomaliMedia Online)-Saraakiisha Ciidamada Maamulka Puntland, ayaa daboolka ka qaaday in Ciidamada Maamulka ay si buuxda ula wareegen deegaano badan oo ka tirsan Buuraaleyda-galgala oo ay ka arrimiyaan Maleeshiyada Alshabaab.
Saraakiisha ayaa sheegtay in dagaalkii dhacay maalinimadii Arbacada ay kula wareegeen deegaanadaasi, waxa ayna shaaciyeen in inta harsan ay kala wareegayaan Alshabaab.
Sidoo kale, Waxaa goobta la qabsaday gaaray Gudoomiyaha gobalka Bari C/samad Maxamad Gallan, Taliye ku-xigeenbka ciidanka booliska Puntland Muxudiin iyo Taliyaha guud ee ciidanka difaaca Puntland Saciid Dheere, iyagoona dhowr saac halkaasi ku sugnaa.
Taliyaha ayaa sheegay in dhinaca Maleeshiyada Al-Shaabab ay weerarkaasi uga dileen inkabadan 18 ka tirsanaa Maleeshiyada, halka dhinacooda uu sheegay in hal askeri ka geeriyooday halka lix ay ku dhaawacmeen.
Dhanka kale, Dagaalka ka dhexeeya Ciidamada Maamulka Puntlannd iyo Maleeshiyada Alshabaab ayaa ah mid inta badan soo laa-laabta, waxa uuna Dagaalkaani lagula wareegay deegaanadaasi kamid yahay dagaalada soo noqnoqday.